केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा नदिनु अर्को असंवैधानिक कदम : भीम रावल - Himali Patrika
केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा नदिनु अर्को असंवैधानिक कदम : भीम रावल
हिमाली पत्रिका १७ फाल्गुन २०७७, 7:51 am
प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीम बहादुर रावलले आफूहरुले नेतृत्व गरेको नेकपा नै आधिकारिक भएको र सबै कमिटीमा आफूहरुसँग बहुमत रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध सबै दल, नागरिक समाज, बुद्धिजिवी आन्दोलनमा उत्रिएको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि सडकमा आउने सबै शक्तिसँग सहकार्य गरिने पनिउनले सुनाए। उनले भने,‘हामी सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छौं।’ ओलीले जनताले सरकार चलाउन दिएको पाँच वर्षको जनमतलाई अपमान गरेको रावलको भनाई छ। उनले अहिले ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नै नभएको भन्दै गुटको संज्ञा दिए।
रावलले अब को प्रधानमन्त्री हुन्छ ? भन्ने कुरा आफूहरुको लागि ठूलो कुरा नभएको पनि सुनाए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री को हुन्छ? भन्ने हाम्रो विषय होईन्। सर्वोच्च अदालतले यत्रो फैसला गरेको छ, हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस जसपा दल, नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ। हामीलाई मन्त्री हुने, प्रधानमनत्री हुने हतारो छैन्। कानून हाम्रो पक्षमा छ। हामीले हतारो नगरेको हो। राष्ट्रिय हितलाई माथि राख्नुपर्यो। अहिले हामी छलफलमा भएकोले हतारो नगरेको हो।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसअघि नै कारबाही गरिसकेको सुनाउँदै अब एकता नहुने रावलको भनाई छ। त्यस्तै, आफ्नो पार्टीका अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले पनि प्रधानमन्त्री हुन्छौं भनेर नभनेको सुनाउँदै रावलले भने,‘प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रधानमन्त्री हुन्छौं भनेर दाबी गर्नुभएको छैन्। सहमतिबाट जो पनि बन्ने भयो। संविधानको मर्यादा, लोकन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय हितको रक्षा, नेपाली जनताको भावना परिपूर्ति गर्नुपर्छ।’
उनले एमससीसी पारित गर्ने भनेर हल्ला गरिएको पनि गुनासो पोखे। त्यस्तै, नेकपा, कांग्रेस र जसपा मिलेर भारतलाई पनि अनुकुल हुने सरकार बनाउने कुरा प्रचण्डले गर्नुभएको छ नि भनेर सोधिएको एक प्रश्नमा रावलले भने,‘सबै दलहरु मिलेर गयौं भने लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि अगाढि बढ्छ। भारत र चीनसँग सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्नुभएको हो।’
आफूहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा ट्याक्सी जलाएको प्रसंगमा उनले त्यसमा आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको कुनै संलग्नता नरहेको पनि जिकिर गरे। उनले भने,‘त्यसमा पनि साईबर अपराधी संलग्न होलान् जस्तो लाग्छ। म टोखामा बस्ने व्यक्ति हुँ। जलाउने र ध्वंस गर्ने नीति हाम्रो होईन। यदि सरकारले ती व्यक्तिलाई कारबाही गरेन भने, त्यसमा संलग्न भनेको साईबर स्याल वा साईबर अपराधी हुन्।’
रावलले अहिले आफूहरुको मुख्य विषय प्रधानमन्त्री ओलीमाथि भएकोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कारबाही नगर्ने सुनाए। उनले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीमाथिको प्रसंग छ। केबल प्रधानमन्त्रीजीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम गर्नुभयो र अदालतको यत्रो फैसला गर्दा पनि म त प्रधानमन्त्री नै रहिरहन्छु भनेर बोल्ने काम गर्नुभयो। यो त उहाँले लल्कार्ने काम हो।’
सांसदहरु खरिदबिक्रि सुरु भयो अरे नि भनेर सोधिएको अर्को प्रसंगमा रावलले भने,‘देशको प्रधानमन्त्रीले, सांसद किनबेच सुरु भयो भन्नु देशको अपमान हो। लोकतन्त्रको अपमान हो। हाम्रो त दिमागमा पनि त्यस्तो आउँदैन्। तर, ओलीको दिमाग नै त्यस्तो छ।’
आफ्नो समूहका नेता रघुजी पन्तले कोमल वलीको बारेमा गरेको टिप्पणीबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। उनले भने,‘खै, के भन्नुभयो ? त्यो उहाँलाई नै सोध्नुहोस्। अलिक राम्रो होला कि।’
रावलले पार्टीका सबै कमिटीमा आफूहरुको बहुमत रहेको जिकिर गरे। उनले भने,‘केन्द्रीय कमिटीमा झण्डै दुई तिहाई छ, स्थायी कमिटीमा दुई तिहाई छ। संसदीय दलमा हामी बहुमतमा छौं। निर्वाचन आयोगले बैद्यताको कुरा घामजत्तिकै छर्लङै छ। किन ढिलाई गरेको हो ?’
ओली समूहका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्नो समूह बहुमतमा भएको (एक सयभन्दा बढि सांसद) छन् भनेर गरेको दाबीमा कुनै सत्यता नभएको रावलको भनाई छ। उनले भने,‘ह्विप लगाएर कारबाही गर्छु भने। तर, उल्टै उहाँहरुमाथि कसरी कारबाही हुन्छ, मैले विधानमा भनिसकें।’ उनले ओली पक्षसँग संसदीय दलमा बहुमत भए त्यो देखाउन चूनौति पनि दिए। उनले भने, ‘ल लाईन लगाएर देखाउनुहोस्। को–को रैछन्? हामीसँग स्पष्ट बहुमत भएको कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन लागेको भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कुरा उहाँले गर्नुभएको होईन र ?’
रावलले आफ्नो पक्षसँग स्पष्ट बहुमत रहेको दाबी गरे। उनले भने,‘नेकपामा सांसदहरु १६९ हो, त्यसमा बहुमत हुनलाई जति चाहिन्छ, त्यति हामीसँग छ।’ उनले दलको आधिकारिकता दिन निर्वाचन आयोगले ढिलाई गरेकोमा गुनासो पोखे। उनले भने,‘आयोगले ढिलाई नगरे हुन्छ। कानूनको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। आयोगले विलम्ब गर्नु भनेको दुःखद् कुरा हो। बहुमत हुनेले निर्णय गर्ने कुरा नै आधिकारिकता हो।’
रावलले संवैधानिक नियुक्तीबो सवालमा अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको सुनाए। उनले भने, ‘यो सम्बन्धी मुद्दा विचाराधिन छ। संसदीय सुनुवाई नै नगरी नियुक्ति गर्नु संविधान मिच्ने अर्को काम भयो।’ रावलले वामदेव गौतमको एकता अभियानबारे टिप्प्णी गर्दै आफूहरु त देश एकता र पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको धारणा राखे। आफूहरुले यसअघि एकताकै लागि पहल गरेको उनले स्मरण गराए। उनले भने,‘एकता हुँदा त राम्रो हो। एकता जोगाउन सम्पूर्ण प्रयास गरेकै हो हामीले।’